Ururka siyasaded lagu dhawaaqey
21 Dec 21, 2012 - 9:55:25 AM
Urur siyaasadeedka Talowadaag oo qayb dhankiisa siyaasada Puntland uga soo biiraya ayaa looga dhawaaqey magaala madaxda Puntland ee Garowe ka dib xaflad lagu qabtey Hotel New-Reys.
Dr,Cali Ismaaciil Maxamed ayaa gudoomiye KMG-ah ka ah Ururkan oo uu saxaafada uga waramay Himilooyinkiisa iyo inay ka go’antahay inay doorasho galaan sidii u kasban lahaayen kalsoonida dadweynaha.
Barnaamij siyaasadeedkiisa ayuu soo bandhigey Gudoomiyuhu iyo siday wax uga qaban doonaan Siyaasada ,Amaanka iyo Dhaqaalaha ,waxana uu codsadey taageero iyo garab istaag.
Urur siyaasadeedka Talo-wadaag ayaa noqonaya kii Lixaad ee Puntland looga dhawaaqey ka dib Horseed oo ah xisbiga talada haya ,Hor-Cad ,Ugub ,Midnimo iyo Gahayr.
Guddiga doorashooyinka Puntland waxay sheegeen in bartamaha May la qaban doono Doorashada Golayaasha deegaanka oo xigi doonto tan Barlamaaniga ah ka hor inataan loo gudbin tan madaxtinimada Puntland horaanta 2014.